Yokusetshenziswa, incazelo, ukusebenza kanye indlela yokwakheka eziyinkimbinkimbi amathonsi acinene
Ukuze ekwelapheni izinqubo ukuvuvukala ezithinta yomoya, usebenzisa ithuluzi elihlangene. izinkampani yesilungu yanamuhla anikele ezahlukene imikhiqizo isiqedile. Nokho, otolaryngologists ngokuvamile bathambekele samuntu ezishibhile kodwa ephumelelayo ngesikhathi esifanayo - womshini ekhaleni iresiphi ngamunye nzima lehla.
Ukwakheka ukumiswa umuthi izimpawu enqunyiwe nangokwazi Yiqiniso lesi sifo. A ukuthuthukisa nomphumela oqabulayo bungatholakala ngokusebenzisa isenzo kanyekanye izingxenye eziningana.
Oluqanjwe isixazululo yezokwelapha kadokotela ekhethekile - lena amathonsi eziyinkimbinkimbi ku ekhaleni. Ukwakheka umkhiqizo kuyahlukahluka, njengoba sekushiwo, kuncike izici umzimba kanye nezifo. ingxenye ngayinye kungaba izidakamizwa ehlukile.
Lapho esimisiwe ukuphathwa udokotela akusebenzi, ngokuvamile uye yokwelapha, "okuzenzela" lehla. Abakwazi ukukwenza wena ngokwakho ekhaya noma oda inethiwekhi ekhemisi. Esimeni sesibili, ngempela zidinga aphoyintimenti efanelekile ukusuka udokotela.
Inzuzo enkulu umuthi ukuthi indlela yokwakheka eziyinkimbinkimbi amathonsi acinene njalo kukhethwe ngamunye. Kungaba isetshenziselwe ukunqoba isifo egijima, lapho ukusetshenziswa nezinye izidakamizwa benganikezwa elamukelekile. Drops kokukhomba imbangela inqubo sokugembula. Ngakho-ke, isikhathi yokwelapha kuyehla kakhulu.
Kuhlanganiswe yokuvula amakhala acinene in iziguli ezingane avunyelwe iminyaka emibili. Umnyaka elilungile ukuqala ekwelapheni zokuphefumula uhlelo izifo - iminyaka 5.
Phakathi bokwenza imithi kuhlangene, odokotela bathi:
yokuntuleka ukuhlolwa emitholampilo;
kungenzeka ukusabela ezingezinhle;
emfushane ukuphila eshalofini;
enengcuphe enkulu ukweqisa izidakamizwa.
Ngisho umuntu Ukwakheka eziyinkimbinkimbi sehla phakathi impumulo akuqinisekisi impendulo omuhle emzimbeni. Iziguli eziningi ekugcineni ukuthuthukisa imiphumela emibi ezifana anda blood pressure, tachycardia, noma acinene ukopha. Kulokhu, ukwelashwa kufanele ngokushesha ayeke futhi bafune usizo lukadokotela.
Ezimbili noma multicomponent yokuvula amakhala acinene ukusiza ukudambisa isimo jikelele. Abubuyisela izakhiwo amanzi ka kwezicubu lwamafinyila Ziyancibilika bese kwandisa excretion of uketshezi.
Phakathi kwezinye izinkomba ukusetshenziswa yilezi:
isikhathi eside rhinitis;
ukunqoba sinuses maxillary;
hypersensitivity kuya compounds ezithile.
Kuye uhlobo udokotela Ukwakheka rhinitis ukhetha acinene eziyinkimbinkimbi lehla omdala. Ukuhlonza lwegciwane, kuyodingeka iphumelele ekuhlolweni Kunconywa udokotela. Ngemva kokutadisha imiphumela isiguli ezandleni unikezwa amaphilisi kokulungiselela nomuthi. Ukuqokwa ngempela ebekiwe ngomthamo, imvamisa kwesicelo kanye nesikhathi sokwelashwa.
Isakhiwo eziyinkimbinkimbi amathonsi acinene yizidakamizwa kuphela. Abanalo izithasiselo, udayi noma amakha. The njalo kunazo wasebenzisa izingxenye amaqembu elandelayo kwemithi:
Vasoconstrictor ( "Nazivin", "Farmazolin"). Yiba Neqhaza nokuqedwa edema, ukucinana kakhulu lula ukuphefumula. Inkambo yokwelashwa kumele singeqi iviki elilodwa ngenxa ingozi eliphezulu yoma we mucosa acinene.
Antihistamine ( "Diphenhydramine", "Suprastin"). Yakhelwe ulwe umkhuhlane umsuka nomzimba.
Germicides nemithi elwa namagciwane ( "Dioksidin", "Cefazolin", "Gentamycin"). Aqokwa Ukuze kuqedwe izitshalo igciwane, magciwane amavesi acinene.
Kwama-hormone ( "Hydrocortisone", "Dexamethasone"). Elinesimo evelele isinyathelo eqeda ukuvuvukala, khulula ukuvuvukala. Amalungiselelo yaleli qembu kungenzeka ingasetshenziswa isikhathi eside kokubili abadala kanye nezingane. Ezinganeni limelela ingozi ukwephula imisebenzi adrenal okuyinto banesibopho uketshezi hormone ukukhula.
amanzi Injection noma nosawoti.
Isithako ezivamile kubhekwa "Dioksidin". Ukwakheka acinene eziyinkimbinkimbi sehla kanzima ukulubona ngeso lengqondo ngaphandle le antibiotic. It has a liphinyiselwe isinyathelo eqeda ukuvuvukala kanye anti-edematous, kuyasiza ekudambiseni ukuphefumula.
Njengoba izinto asizayo Ingase ithanyelwe amaconsi eziyinkimbinkimbi amafutha abalulekile, Vitamin izixazululo noma ayo zezitshalo (isib Aloe vera).
Izibonelo abadala kanye nezingane zokupheka
Ngo Pediatrics okwandile amaconsi eziyinkimbinkimbi okuyinto azisekelwe "Miramistin". Ethandwa kakhulu yiwona inhlanganisela elandelayo izingxenye:
"Nazivin" "Lincomycin" "Nasonex" ngezabelo alinganayo + 2-3 amathonsi Aloe juice.
"Dioksidin" unezela "Naphthyzinum" futhi "hydrocortisone" ivolumu ezifanayo.
Lapho ukuvuvukala adenoids ukhombe "Dexamethasone", kuhambisana "naftizina" futhi "Ceftriaxone".
Ezigulini omdala, kunzima kubala kungenzeka imithi, kusukela uhlu izifo lisabalele. Isibonelo, Kunconywa "Cefazolin" lihambisana "Naphthyzinum" ekwelapheni rhinitis esibangelwe igciwane, "Diphenhydramine" futhi "Dexamethasone". Le nhlanganisela izidakamizwa udinga ukwengeza umpe ze-agave. Ukuze izimpawu rhinitis iguliswa edingekayo ukuxubana "Ofloxacin", "Hydrocortisone" futhi "Dioksidin" e isilinganiso 1: 1.
Inhlanganisela ngaphezulu kokubili ngabantwana nangabantu abadala kukhona eziyisisekelo. Avame kakhulu ezitholakala izincomo udokotela.
Ngaphambi kokusebenzisa i-amaconsi kudingeka ukuhlanza amavesi acinene ka isikhwehlela. Ngenxa yale njongo kungenzeka bahlanza nge brine. Izingane ezincane belulekwa iconsa nosawoti, bese ncela anqwabelene imfihlo aspirator ekhethekile.
ekhaleni Inxanxathela lehla imfundo ngokuvamile weluleka umbe ngokushintshana e ikhala ngalinye. Lapho ingane uyawuthiya izinqubo, imithi kuyadingeka imanzise a swab ukotini, bese uyifaka imizuzu embalwa kuleli ikhala. Ngemva ngempumuzo ukuphefumula e amavesi amabili acinene econsa amafutha kancane zemifino.
Isikhathi sokuphila kwayo eshalofini ngokuvamile kushiwo emuthini. Njengomthetho, ayidluli inyanga eyodwa. I isitsha kufanele agcinwe kule esiqandisini. Ngaphambi kokuqala ukusebenzisa kwayo kumelwe asuswe chamber kanye izandla efudumele ekamelweni lokushisa. Uma ekhemisi butylki akukho ukuvuza, kubalulekile ukusebenzisa pipette. Gcina imithi kungaba kwezinsuku 14.
Lapho ukuthenga imithi?
otolaryngologists Abaningi baphikisa ngokuthi eziyinkimbinkimbi Ukwakheka ekhaleni amathonsi aphumelela kakhudlwana. umphumela yabo liphinyiselwe zokwelapha ngenxa ukusetshenziswa izingxenye ezithile ezithinta ukutheleleka itholiwe. Ngingalutholaphi ukuthenga imithi?
Okokuqala, udinga ukuvakashela udokotela ENT futhi ibhekane luhlolo ehleliwe. Ngokusho imiphumela isazi kuyodingeka ukuba wahlulele isidingo ukusetshenziswa kwalezi zimali. Khona-ke kufanele ubhale Ukwakheka kadokotela eziyinkimbinkimbi ekhaleni amathonsi. Nge kufanele uxhumane ekhemisi futhi wenze umyalelo izidakamizwa. imithi Ready kumele sisetshenziswe kuphela ngokusho imiyalelo, kulandela imithetho ukulaliswa esibhedlela.
Ikhemisi nge umnyango kadokotela, ngeshwa, ayitholakali kuwo wonke amadolobha. Ngakho-ke, ezinye iziguli ukuthenga ingxenye yabo amathonsi upheke kubo ekhaya. Kulokhu, into esemqoka - unamathele ngokucacile ukuba aphoyintimenti kadokotela.
"Magne 6 '- izidakamizwa ngokugcwalisa magnesium ukuntula
Izidakamizwa "Zokardis": yokusetshenziswa
Mini-hotel "Black River" (Petersburg) isihambi isabelomali
Kunganjani fruiting ijikijolo? Indlela ewusizo kule berry?
Inkukhu nengulube. Calorie, ukupheka zokupheka inkukhu nengulube
Imithelela yeMisa 2: ukukopela nabaqeqeshi
Ama-antibiotic Alfa Normiks '- ukusetshenziswa kwezidakamizwa